Munamato kuna Oshun WeRudo.? Kukwezva Rudo uye Kupora.
Munamato kuna Oshun werudo
Oshun munamato. Panguva dzose simba rerudo nderekubata izvo zvomweya zvemweya izvo zvakatumirwa kwatiri kubva mukushingaira.
Ngatirangarirei, ipapoka, kuti mumanyoro matsvene Mwari amene anotidzidzisa kunyengetera, ndiko kuti, tsika iyi inofanira kuitwa nehana uye nemutoro sezvo mhedzisiro inogona kutishamisa.
1 Munyengetero kuna Oshun Ndiani Oshun?
2 Munamato kuna Oshun werudo
3 Ndirini pandinogona kunyengetera?
4 Ko munamato weOshun unoshanda nekukurumidza here?
Munyengetero kuna Oshun Ndiani Oshun?
NdiMwari mune chitendero cheYoruba. Zvinotendwa kuti iye ane simba rakakosha pamusoro porudo uye zvese zvinonzwisa tsitsi zvinyorwa.
Zvinotendwa kuti pakutanga kwechitendero vakadzi havana kugamuchirwa uye iye akanzwa asiyiwa sezvo kutenda kwake kwaive kusingazungunuke.
Kugumbuka uku kwakamuita kuti aite zviito zvakatadzisa vakadzi vetaundi kubata vana, nekuda kweichi chikonzero ivo Orishas vakamanikidzwa kumukoka kuti atore chikamu mune chechitendero chezvaakabvuma kwaari asi mushure mekukumbira kazhinji nekukumbira kwake kwaive kwatova nekukuvara kwakawanda. Izvo zvaakanga aitira vanhu.
Paakatanga kuita zviitiko zvechitendero, sekuda kwake, zvinhu mutaundi zvakadzokera kune zvakajairika; vakadzi vacho vanogona kubata uye mapurojekiti akaremara aigona kusimuka kuenda kumberi.
Nesimba repasi, Nekuvapo kwemoto, Nekufemerwa kwemweya, Nokunaka kwemvura, ndinokumbira uye kururamisa Oshun, Na simba yemwoyo inoyera uye yemisodzi yakadonhedzwa nerudo, Saka kuti vaende ku (JMM) chero kwavanenge vari, vachiunza mweya wavo pamberi pangu (LR), uchisunga iwo wakasarudzika kune wangu.
Mweya wake ngaugeze mukati merudo rwangu uye udzorere rudo rwangu mune quadruple.
Icho (JMM) haambodi mumwe munhu uye kuti muviri wake chete ndewangu (LR) ndeyangu.
Izvo (JMM) hazvinwe, usadya, usataure, usateerera, usaimbe kunze kwekunge ini ndiripo.
Ndangariro dzangu ngadzimubate nekusingaperi, nemasimba oMunamato uyu.
Musikana wangu chena, Oshun ay anoshandisa simba rake uye anofamba (JMM) kure chero mukadzi waari naye panguva ino; Uye kana ndaizodaidza zita rangu.
Ini ndoda kusunga mweya nemuviri we (JMM) nekuti ndinoda iye akasungwa uye ari murudo neni (LR) Ini ndinoda (JMM) kuti arambe achivimba nerudo rwangu, ndinoda kumuona achipenga nezvangu (LR) achindishuvira sekunge (LR) ndiye Munhu wekupedzisira pachiso chenyika.
Ini ndinoda kuti moyo wake unamatire kwandiri nekusingaperi, kuti muzita reiyo Oshun iyi kunzwa kuchakura mukati (JMM) kumusiya akasungwa mumaawa angu makumi maviri nemana pazuva.
OH Oshun, iwe unofanirwa kundiunzira (JMM), nekuti ndinomuda, uye ndinomuda nekukurumidza.
Namasimba ako akavanzika, rega (JMM) atange kundida (LR) kubva panguva ino chaiyo uye funga chete nezvangu (LR) sekunge ndini ndega munhu munyika.
Icho (JMM) chinouya chichimhanya kwandiri, chizere netariro uye chishuwo, icho (JMM) haina rugare kusvika achiuya kuzonditsvaga, uye adzoka kwandiri. Oshun Ndinokukumbirisa kuti undiunze ku (JMM.)
Izvo (JMM) zvinondida kwazvo, huya unyoro uye sekuda kwangu. Ndatenda Oshun.
Uye ini ndinovimbisa kugara ndakatakura zita rake neni. Ameni
Uyu ndiwo munyengetero waOshun werudo runonyanya kuzivikanwa.
Kumukumbira kuti atibatsire muzvinhu zverudo kumupa mukana wekupinda muhupenyu hwedu hwepedyo kuitira kuti atibatsire kuwana kutadza kwake uye kumusimbisa.
Mune zviitiko apo matambudziko akatove akatenderera uye zvinoita sekunge hapana chingaitwe, ndidzo nyaya dzaanowedzera kuve nesimba kuti atibatsire.
Minamato Izvo zvinogona kuitwa chero nguva sezvo ivo vari chishandiso icho chatinogona kushandisa chero chatinoda.
Kana chiri chokwadi kuti zvakanaka kuti unamate munharaunda yakanaka, asi izvi hazvisi izvo zvinodikanwa zvega.
Tinogona kugara tichinamata, nguva dzese uye munzvimbo dzese.
Ko munamato weOshun unoshanda nekukurumidza here?
Wese munamato une simba kana ukaitwa nekutenda mumoyo nekuti hatingauye kuzokumbira rubatsiro kubva kune mumwe munhu watinofunga kuti haangatibatsire.
Kana isu tikanamata imhaka yekuti tinotenda musimba remunamato.
Kutenda kusingazungunuke kunowanikwa kuburikidza nekuita, sezvatinodzidza nyika Zvepamweya isu tiri kukura mukutenda uye muzivo yezvinhu zvese zvine chekuita neminamato, izvo zvakakosha zvikuru kune hupenyu hwedu.
Ita zvakanyanya kwesimba remunamato waOshun werudo!
Simba munamato wekudzoka kwemudiwa
Munamato kuRufu Rutsvene nekuda kwerudo
Whatsapp mapoka ekutamba